वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ? – Namaste Host
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ?
२०७७ चैत २०, काठमाडौँ । नेपाल मा अहिले बाक्लो तुयेलो ले गर्दा आम सर्वसाधारण जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यसको कारणले सिक्षा मन्त्रालय द्वारा ४ दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अबस्था रहिरहेका ले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारेमा औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी रहेको जानकारि मा उल्लेख छ
२०७७ चैत २०, काठमाडौँ । नेपाल मा अहिले बाक्लो तुयेलो ले गर्दा आम सर्वसाधारण जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यसको कारणले सिक्षा मन्त्रालय द्वारा ४ दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अबस्था रहिरहेका ले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारेमा औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी रहेको जानकारि मा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । नेपाल मा अहिले बाक्लो तुयेलो ले गर्दा आम सर्वसाधारण जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यसको कारणले सिक्षा मन्त्रालय द्वारा ४ दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अबस्था रहिरहेका ले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारेमा औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी रहेको जानकारि मा उल्लेख छ ।
८ वर्षमा बिहे भएपछि कसरी एमबीबीएस पूरा गरिन रुपाले ?
January 26, 2021 January 26, 2021 Bijay Lama
लिपिङ पुल अवरुद्ध हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका यी समान तातोपानीमै रोकियो , ठूला अस्पतालमा देखिन सक्छन यस्ता समस्या